Hawaii dia nandefa programa tsy miankina amin'ny vaksiny natao vaksiny tany Etazonia sy Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Hawaii dia nandefa programa tsy miankina amin'ny vaksiny natao vaksiny tany Etazonia sy Etazonia
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Io programa io dia ahafahan'ny mpandeha vaksiny vita any Etazonia sy Etazonia Teratany Amerikanina handingana ny fepetra takin'ny fanjakana miaraka amin'ny porofon'ny vaksiny.
Ireo mpizaha tany vita vaksiny any Etazonia na Etazonia Territories dia mety handray anjara amin'ny programa manomboka amin'ny 15th andro aorian'ny fatra faharoa amin'ny vaksinin'ny Pfizer na Moderna na fatra tokana amin'ny vaksinin'i Johnson & Johnson.
Ireo mpitsangatsangana dia tsy maintsy mitondra dika mitovy amin'ny antontan-taratasy fanaovana vaksininy mba hampisehoana ireo mpanala lamba eo am-bavahady alohan'ny hidirany sy / na rehefa tonga any Hawaii.
Manaova sonia ny fanamarinana ara-dalàna an-tserasera amin'ny Safe Travels Hawaii.
Hawaii dia mamarana ny fiomanana amin'ny famoahana ny 8 Jolay ny Fanjakan'i Hawaiiprograma fanokana vaksiny ho an'ireo mpandeha an-trano, any Hawaii izay vita vaksiny tany Etazonia na faritanin'i Etazonia. Io programa io dia ahafahan'ireo mpandeha lavitra ireo mandingana ny fepetra takin'ny quarantine an'ny fanjakana miaraka amin'ny porofon'ny vaksiny.
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny any Etazonia na Etazonia Territories dia mety handray anjara amin'ny fandaharana miavaka manomboka amin'ny 15th andro aorian'ny fatra faharoa an'ny vaksinin'ny Pfizer na Moderna - na manomboka ny 15th andro taorian'ny nahazoan'izy ireo fatra tokana tamin'ny vaksinin'i Johnson & Johnson.
Ho fanampin'izay, ireo mpandeha avy any Hawaii dia tokony:
Ampidiro ao amin'ny kaonty Safe Travels Hawaii ny iray amin'ireo antontan-taratasy fanaovana vaksiny telo, alohan'ny handehanana mankany Hawaii. Ny iray amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto dia tsy maintsy apetraka:
Karatra firaketana vaksiny CDC COVID-19
VAMS (Rafitra fitantanana fitantanana vaksiny) fanontana OR
DOD DD endrika 2766C
Ny sehatra nomerika Safe Travels dia mamela ny fampidinana antontan-taratasy vaksin ho an'ny dia tonga any Hawaii ny 8 Jolay sy ny sisa.
Manaova sonia ny fanamarinana ara-dalàna an-tserasera amin'ny Safe Travels Hawaii, manamafy ny antontan-taratasy nakarina dia marina sy marina.
Mitondrà dika mitovy amin'ny antontan-taratasin'izy ireo amin'ny vaksiny mba hampisehoana ireo mpanala lamba eo am-bavahady alohan'ny hidiranao sy / na rehefa tonga any Hawaii ianao. Hijery / hanamarina ireo antontan-taratasy fanaovana vaksininy, kara-panondro sary, anarana ary DOB ireo mpijery ary hanamafy fa voasonia ny fanamarinana.
NAOTY: Ny ankizy latsaky ny 5 taona dia tsy takiana hizaha toetra ary tsy hajanona ho karamaina raha mandeha miaraka amin'ny olon-dehibe izay manana fanandramana fanandramana mialoha ny dia na fialan-tsasatra vaksiny. Ny ankizy 5 taona no ho miakatra mbola tsy vita vaksiny dia tokony handray anjara amin'ny Fandaharam-pitsapana mialoha ny dia lavitra ary hizaha toetra miaraka amina mpiara-miasa amin'ny fitiliana azo antoka hialana amin'ny quarantine 10 andro tsy maintsy atao.
Ny fanjakana dia nahomby tamin'ny fandefasana ny programa fanavakavahana vaksiny ho an'ireo mpandeha vita vaksiny Fanjakan'i Hawaii, amin'ny 15 Jona.
Ity programa ity dia tsy mahatafiditra mpandeha iraisam-pirenena.